Siyi-GH ephambi kolwandle enamagumbi ali-18 eGadi🌴
Fehendhoo, North Province, Maldives
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguSama
· 13.5 iibhafu
Siyindlu yeeNdwendwe engaselunxwemeni e-Fehendhoo Island, e-Baa Atoll. Sinendawo yokuphumla yokuphumla elunxwemeni phambi kwendawo yethu yokutyela evulekileyo apho iindwendwe zethu zinokufunda khona, zibe nelanga, okanye ngokulula...phumla! Onke amagumbi akwiGadi yethu yeFruit ezolileyo. Le iya kuba yindlu yakho yendalo, apho ingxolo kuphela ivela kwi-symphony yeentaka emithini ekuseni. Yiza! Siza kukubonisa ubuhle bale UNESCO Biosphere Reserve kwaye siya kukukhokelela kumlingo weli hlathi kunye nehlabathi elingaphantsi kwamanzi!
Ihotele yethu iphambi kolwandle kunye neFehendhoo Lagoon. . .sijikelezwe yimithi yewaka leminyaka, i-Nikagaskaras edumileyo kunye nehlathi leNdalo. Isibini esithathwini seFehendhoo singamahlathi ashinyeneyo kwaye esinye isithathu kukuhlala abantu besiqithi.
Indlela eya kwi-bikini yethu entle, ekufutshane kakhulu nehotele yethu, idlula kobu buhlaza bucocekileyo, apho uya kuziva eyona mvakalelo yokuphefumla...
yiza usityelele! Siyathembisa ukuba uya konwaba njengathi!
Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Isiqithi saseFehendhoo sesinye sezona ziqithi zaseBaa Atoll I'm the Maldives. Apha, UBOMI buphilwa ngesantya seNdalo. Ukuzola, uxolo, kunye nendawo ekhuselekileyo kakhulu yokuhlala ngeeholide zakho ongasoze uzilibale! Abamelwane bethu? Abahlali besiqithi kunye nezilwanyana ezihlala kuzo. Uluhlaza, oMthubi kunye noBhulu iya kuba yimibala yeentsuku zakho 💚💙
Umbuki zindwendwe ngu- Sama
IiNdwendwe zethu zinokusitsalela umnxeba okanye zisithumelele umyalezo okanye ziqhagamshelane nathi ngalo naluphi na uhlobo lwemidiya yoluntu (kwinombolo yoqhagamshelwano efanayo).